Maqaal: Waxaa Wali socda dagaalka u dhaxeeyo Ciidamada Xabashida iyo jabhada Somaliland - Latest News Updates
Maqaal: Waxaa Wali socda dagaalka u dhaxeeyo Ciidamada Xabashida iyo jabhada Somaliland
Taariikhdu waa bisha Maarso 2028. Buuraleyda Soomaalilaand oo dhan waxaa ka socda dagaallo dhuumaalaysi u badan. Jabhado waddani gobannimo doon ah iyo kuwo diineed oo jihaadi ah ayaa halgan kulul ku la jira gumaysiga Xabashida.
Xabashidu wax ay haysataa Berbera ilaa Saylac oo ay ku lee dahay saldhigyo millateri oo ay fadhiyaan 35000 oo askari. Jabhadaha cidda inta badan la dagaallamaysaa ma aha ciidanka Xabashida ee waa malleeshiyada Liiyuu Booliska oo ah dad soomaaliyeed oo Xabashida u adeega. Qaarkood Soomaaligalbeed baa la ga keenay, qaar kalena Soomaalilaand gudaheeda ayaa la ga qortay.
Taariikhdu waa Maarso 2018. Waa tii ay koox maangaab ahi Xabashida Berbera siisay ee soo dajisay, iyaga oo is leh lacag baad ka dheefaysaan, aqoonsi baad ku helaysaan, ama xukunka ayay idinku ilaalinaysaa. Waa kuwii u xidhay dhul dekedda ku meersan oo gaadhaya 12 km oo labajibbaar ah. Markiiba Xabashidu Berbera waa tii keentay ciidan ay sheegtay in ay danaheeda dekedda ka ga ilaashanayso argagixisada iyo waddaniyiinta joogitaankeeda diiddan. Markiiba se waa tii ay dagaalyahanno dhiidhiyay ku kaceen. Xabashiduna waa tii kumannaan ciidan ah oo xoojin ah keentay. Mar qudha waa tii xaaladdu isu beddeshay qabsasho iyo gumaysi. Waa tii la ogaaday DP World in ay saamigeedii Berbera Xabashida ka ga iibisay lacag ka badan $700 milyan oo faa’iido ah. Xukuumaddii camiilka ahayd ee Hargeysa arrintu waa tii faraheeda ka baxday, cabashadeediina waa tii Xabashidu waxba ka soo qaadi wayday. Alla xaquqalinkii eedayeey! rag leh waa tii la maqlay! Qaarkood markii ay muranka dayn waayeen waa tii Xabashidu Jeel Ogaadeen ku gurtay.
Dawlado ay ka mid yihiin Soomaaliya, Qadar, Turkiga iyo Masar waa tii ay ashkato ku saabsan waxa Soomaalilaand ka socda ay hor dhigeen Golaha Amniga ee Qaramada Mudoobay, laakiin Maraykanka ayaa is hortaagay kuna hanjabay in uu ku joojin doono diidmada qayaxan ee Vito. Xabashiduna wax ay si badheedh ah u caddaysay Berbera ilaa Saylac in ay dhulkeeda ka mid yihiin. Doodo siyaasadeed, aqooneed iyo saxaafadeed oo qabsashada Xabashida ku saabasan baa dunida ka bilawday. Giddigoodna waxaa isku fuuqsaday Xabashida oo sheegtay in ay arrinta oggolaansho u ga heshay xukuumadda dabaqoodhiga ah ee Hargeysa, iyo quwadaha Masiixiga oo ku dacwiyay in Itoobbiya tahay dal weyn oo ay qarniyada badan muslinku cunaqabatayn ku hayeen, xaqna u lee dahay bad ay Geeska Afrika ku yeelato…
2028 halgankii xorayntu waa kaa socda, gacanta sarena waxaa leh Xabashida iyo malleeshiyada raacsan ee ay soomaalida ka qoratay..
Qormadii Ibraahin-Howd Yusuf